Ikwucha ọcha Bristol
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » GB » Ikwucha ọcha Bristol1
1 - 1 nke 2
Bipụtara 3 months ago
Koodu nzipu ozi: BS1 1EH
My Cleaners Bristol na-atụ aro ọtụtụ ihicha ọrụ na otu onye n'ime ha bụ oven ihicha. Anyị na-eji naanị ngwaọrụ dị elu na nchacha. Echegbula ma ọ bụrụ na unyi ekpokọtara ìgwè ndị ọkachamara anyị ga-elekọta ka ewepụ ya na teknụzụ anyị pụrụ iche maka nhicha ọkụ nke na-adịghị emebi elu. You nwere ike ịkwụ ụgwọ tupu ma ọ bụ mgbe ọrụ ahụ gasịrị, site na ụzọ abụọ-ego ma ọ bụ PayPal. Gaa na webụsaịtị anyị ka ịmụtakwu banyere ọrụ anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla kpọọ anyị na 011 7242 0497.
Aha ya 19. Aug 2020
Aha ya August 19, 2020
United Kingdom nke Great Britain na Northern Ireland, nke a na-akpọkarị United Kingdom (UK ma ọ bụ UK) ma ọ bụ Britain, bụ mba nwe obodo nke dị n'akụkụ ụsọ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke ala Europe. United Kingdom gụnyere agwaetiti Great Britain, akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Ireland, na ọtụtụ obere agwaetiti. Northern Ireland nwere oke ala na Republic of Ireland. Ma ọ bụghị ya, United States gbara Oké Osimiri Atlantic gburugburu, ya na Oké Osimiri North n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, ọwa mmiri Bekee nke dị na ndịda na Oké Osimiri Celtic na ndịda ọdịda anyanwụ, na-enye ya oke osimiri 12th kachasị ogologo n'ụwa. Oke Oké Osimiri Irish kewara Great Britain na Ireland. Ala niile dị na United Kingdom bụ puku kilomita iteghete (puku asaa na narị anọ). United Kingdom bụ ọchịchị onye kwuo uche ya na ọchịchị ndị ọchịchị. Eze a bụ Queen Elizabeth II, onye chịrị kemgbe 1952, na-eme ya onye isi ọchịchị kachasị ogologo ugbu a n'ụwa. Isi obodo United Kingdom bụ Lọndọn, obodo zuru ụwa ọnụ na etiti ego na mpaghara mepere emepe nke mmadụ dị nde 10.3. United Kingdom mejupụtara mba anọ: England, Scotland, Wales na Northern Ireland. Isi obodo ha bu London, Edinburgh, Cardiff na Belfast. E wezụga England, mba ndị ahụ nwere ọchịchị nke ha, nke ọ bụla nwere ikike dị iche iche. Isi obodo ndị ọzọ gụnyere Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, na Manchester. Isle nke Man dị nso, Bailiwick nke Guernsey na Bailiwick nke Jersey abụghị akụkụ nke UK, ebe ha bụ ndị Crown na gọọmentị Britain na-ahụ maka nchekwa na nnọchite mba ụwa. Njikọ dị n'etiti Alaeze England (nke gụnyere Wales) na Alaeze Scotland na 1707 iji mepụta Alaeze nke Great Britain, na njikọ sochiri na 1801 nke Great Britain na Alaeze nke Ireland kere United Kingdom nke Great Britain na Ireland . Iri isii na isii nke Ireland kewapụrụ na UK na 1922, na-ahapụ usoro ugbu a nke United Kingdom of Great Britain na Northern Ireland. A nakweere aha UK na 1927 iji gosipụta mgbanwe ahụ. E nwere Territory Britain nke Ofesi iri na anọ, nke fọdụrụ na Alaeze Ukwu Britain, nke, n'ịdị elu ya na 1920s, gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ala ụwa ma bụrụ alaeze kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme. Enwere ike ịhụ mmetụta Britain na asụsụ, ọdịbendị na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọtụtụ obodo ndị ọ chịburu. United Kingdom nwere akụ na ụba nke isii ụwa niile site na ọnụahịa ala (GDP), yana nke itoolu kachasị site na ịzụta ikike nzụrụ (PPP). O nwere onodu aku na uba nke nwere oke onodu ogugu nke umu mmadu, nke iri na ise n’uwa. Ọ bụ mba mbụ mepere emepe na mba kacha nwee ike na ụwa na narị afọ nke iri na iteghete na mmalite narị afọ nke iri abụọ. Obodo UK ka nwere ikike dị ukwuu, nwee nnukwu akụnụba, ọdịnala, ndị agha, sayensị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa. Ọ bụ obodo a na-ahụ maka ngwa agha nuklia ma bụrụ nke isii na mmefu agha na ụwa. Ọ bụ onye otu na-adịgide adịgide na United Nations Security Council kemgbe nnọkọ mbụ ya na 1946. United Kingdom bụ onye ndu otu Commonwealth of Nations, Council of Europe, G7, G20, NATO, Organization for Economic Co -Nmekorita na mmepe (OECD), Interpol na World Trade Organisation (WTO). Ọ bụ onye so na European Union (EU) na onye bu ya ụzọ, European Economic Community (EEC), maka afọ 47, n'etiti 1 Jenụwarị 1973 na nkwụsị na 31 Jenụwarị 2020.
Nearlọ akwụkwọ dị nso BS1 1EH